ဒါကိုဘယ်လိုခေါင်းစဉ်အောက်ထည့်မလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Marketing » ဒါကိုဘယ်လိုခေါင်းစဉ်အောက်ထည့်မလဲ?
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 8, 2012 in Marketing, Photography | 28 comments
1 ဖော်တဲ့မော်ဒယ် တစ်
2 လန်းလန်းကလေး 2
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အရက်ဘီယာ စီးကရက်ကြော်ငြာတွေကိုအားမပေးပါဘူး။
နောက်တော့ တီဗွီမှာ ဂျာနယ်မှာ မဂ္ဂဇင်းမှာအရက်ဘီယာမပြောနဲ့ အဖျော်ယမကာဆိုတဲ့စကားလုံးတောင်
နောက်တော့ သူတို့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကို ရေသန့်ပုံပြောင်းလို့တွေ့လာရပြန်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင် ထမီရင်လျှားနဲ့မိန်းမချောလေးပုံကို ဘီယာကြော်ငြာမှာတွေ့လာရပြန်ပါတယ်။
ခရီးလမ်းခုလတ် ထမင်းစားနားကြတော့ ဆိုင်နံရံမှာကပ်ထားတဲ့အရက်ကြော်ငြာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။
အခုလိုတိုးတက်တဲ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံခြားကလူက မြန်မာပြည်လာပြီး စီးပွားရေးလုပ်တော့
သူတို့နဲ့ဆက်စပ်တဲ့သီအိုရီတွေ ပါ မြန်မာပြည်ရောက်လာပါတယ်။
အဲတော့ မားကက်တင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့သီအိုရီတွေ ကျနော်တို့ မကြားမသိဘူးခဲ့တာတွေ့သိလာရပါတယ်။
အရင်ကမြန်မာကြော်ငြာဆိုရင် လုံလုံခြုံခြုံ ။
အခုဒီပုံလေးမြင်တော့ အောင်ငါတို့လဲ လွတ်လပ်ပဟဲ့လို့တွေးမိပါတယ်။
ဒီပုံတွေမြင်ရင် မားကက်တင်းသီအိုရီတွေထဲမှာ ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်ထည့်မလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဗျာ။
မသောက်လည်းမူး မြင်ရင်လဲရူး ဒီလိုပေးကြည့် မယ်
`သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွား´ ခစ်ခစ်ခစ် …… သဒ္ဒါတရားထက်သန်သူတွေပေ့ါ …. ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်း ၀ ……..
ပိုမိုရှင်းအစား စကားလုံးအသစ်ပေးလို့များရရင် ဖော်မိုးရှင်းပေးချင်ပါရဲ့။
နို့ပြ မာကတ်တင်း လို့ ခေါင်းစဉ်တွင်စေ သတည်း
it’s justasex-sell
Sex in advertising or sex sells is the use of sexual or erotic imagery (also called “sex appeal”) in advertising to draw interest toaparticular product, for purpose of sale. A feature of sex in advertising is that the imagery used, such as that ofapretty woman, typically has no connection to the product being advertised. The purpose of the imagery is to attract the attention of the potential customer or user. The type of imagery that may be used is very broad, and would include nudity, cheesecake, and beefcake, even if it is often only suggestively sexual.
ကြားဖူးတာ မှန် မမှန်တော့ မသိ
မိန်းမတွေရဲ့ အဲဒီနေရာကို မှန်မှန်ကြည့်ပေးရင် အသက်ရှည် ဆိုပဲ
ကြည့်သူတွေ အသက်ရှည်စေဘို့ ဒါနပြုပေးနေတဲ့ ကလေးမလေး
ဒါ့ထက် ပိုတိုးလို့ ဒါနတွေ ပြုနိုင်ပါစေ
လေးပေါက်ရေ … ပြောမယ့်သာပြောတာနော် … ဒီလိုပုံတွေဆို … သူချည်းပဲရိုက်နေရတယ် … ။ အကျိုးပေးတယ်ထင်ပါရဲ့ … အဟီး ဒီထက်နည်းနည်းပိုပိန်လျှင် ပိုကြည့်လို့ကောင်းမယ် ….
အရက်ပုလင်းထက် .. လူပုံက ပိုကြီးနေတာ …. တစ်ခါတစ်လေ ကြော်ငြာမြင်လျှင် ဘာများကြော်ငြာတာပါလိမ့်လို့ …….. မြင်အောင်ကြည့်ရတယ် … ။
သာဓုပါ တော် ။ သူများတွေကို ကင်မရာမန်း ဖြစ်ချင်တာ ကွယ် :-) ဂလု ဂလု
မားကက်တင်းကို ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်တော့ ဖော် ကက်တင်းပေါ့ဗျာ………… ဟုတ်ဘူးလား
သားသားဂဒေါ့ဖြင့် ဒါပဲ ကြောတတ်တယ် ..
ကျေးလက်ဒေသတွေ ဟာ မြို့ ပြထက် စာရင် လုံခြုံ မှု ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု တွေ အားနည်းပါတယ်။ ပညာရေး ဆိုရင်လည်း လည်း အများ အားဖြင့် ၄ တန်းလောက်နဲ့ ကျောင်း ပြီး သွားတတ် ကြတော့ အသိပညာ ဗဟုသုတ အားနည်း တတ်ကြပါတယ်။ ..ဒီလိုအခြေ အနေမျိုးတွေမှာ ဒီလိုကြော်ညာတွေနဲ့ ဆိုတော့ ……
ကျေးလက်ဒေသတွေ က မိန်းကလေးတွေ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့် စော်ကား ခံရ တဲ့အဖြစ်တွေရဲ့ တရားခံ တွေ ထဲမှာ အဲဒီ ကြော်ညာ တွေ အဓိက ပါနေပါတယ်။
ကြည့်မိဒေါ့ အရမ်းကို ဂွဒ်ဒယ်…
ဒဂုံ ဒဂုံတဲ့ဗျ…. ဒဂုံဆိုတာ ရမ်ကို ခေါ်ဒယ်..
အရင်တုန်းက ခွေးဖြစ်နေတုန်းက ဘီးအီးဆိုမှာ
အော် အင်းအင်း ……………ဂလု ဂလု ဂလု ဂလု
လေးပေါက်က ဘီယာဆိုင်မှ သိပ်မထိုင်ဖြစ်တာကို အဲဒီလိုကြော်ငြာတွေက ဘီယာဆိုင်တို့ ဘာတို့မှာ အပေါသားဗျ..။
နောက်အဲဒီလို ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ဆင်ဆာမတင်ဘဲရိုက်နေတာ အတော်ကလေးကြာပေါ့..။
အဲဒီ ဒဂုံ အရက်ကဘယ်ကထုတ်လည်းဆိုတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဦးပိုင်ကလေဗျာ..။ ဒီတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိပေမပေါ့။
ဘာပဲပြောပြော အစ်ကိုတင်သမျှကို ဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ site မှာ log in ထားတာပါ
အရက်ကို ကြောငြာတာလား ဘာလားတော့မသိတော့ဘာဘူး
ကောင်းမကောင်းလည်းမသိ ပါဘူး ဒါပေမယ့်
ကိုပေါက်ရဲ့ လက်ဆော့ လေးကကောင်းလိုက်တာဗျာ……..ကျေးကျေးကိုပေါက်
ဦးပေါက် ဘီယာသောက်ရင်းကနေ ပိုစတာ တွေဘက် လှည့်လှည့်သွားတာဒါကြောင့်ကိုး ! ( ဒါတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ ပြောတာပါ ဟဲဟဲ )
နေ့လည်က တွေ့လိုက်ပြီး … အကျဉ်း မန့်လိုက်ပေမယ့် ..
အခုမှ အားသွားလို့ အကျယ် မန့်လိုက်ပါတယ် လေးပေါက်ရေ. ..
အဲ့ဒါ မမှန်ဘူး ဆိုတာလေး ..ပြောခဲ့ချင်ရဲ့ …
Advertising ဟာ Advertising သက်သက် ဖြစ်ပြီး
Sales ဟာ Sales , Marketing ဟာ Marketing ဖြစ်ကြောင်း
ကနဦး ရှင်းပါရစေ …။
ဒါဟာ Advertising သက်သက်ပါ…။ Sex-sell approach
နဲ့သွားတဲ့ Advertising သက်သက်ပါ …
သမိုင်းကို ပြန်သွားကြည့်ရင် (များများမသွားပါဘူး)…စက်မှု ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး
လောက်ထိ သွားကြည့်ရင် …ပစ္စည်းတွေ ပေါပေါများများ ထုတ်တယ် ရောင်းတယ်
ဆိုတဲ့ ခေတ်ပေါ့ဗျာ … အဲ့သည်မှာ ရောင်းကောင်းချင်တော့ ကြော်ငြာတယ် ဆိုပါတော့ …
အဲ့သည့်မှာ Sales ကို တိုးတက်ဖို့ ထောက်ကန်ဖို့ Advertising မွေးဖွားလာတယ် ပြောရမယ်ဗျို့ …
Advertising မွေးဖွားလာပြီး ဘယ်လောက်မှ မကြာခင်မှာပဲ …. Sex-Sell ဆိုတဲ့
အယူအဆ မွေးလာတာဗျ ….ပြောရရင် အဲ့ဒါ ၁၉ရာစု ကတည်းက ဆိုပါတော့ဗျာ …
(အသေးစိတ် မရှင်းတော့ဘူး ကျနော်ပို့တဲ့ လင့်ခ်မှာ လုံလောက်တယ် ထင်တယ်နော..)
ဒါတွေဟာ … မားကတ္တင်း ရဲ့ တစုံတရာသော ခေါင်းစဉ်အောက် က ဆိုပြီး ..
အပြောမခံချင်တာ အပြောမခံနိုင်တာ ကတော့ …မားကတ္တင်း ဆိုတဲ့ ပညာရပ်တခုဟာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့ ကာလမှ ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ ပညာရပ်တခု ဖြစ်တော့သကိုးဗျာ….
အတိအကျပြောရရင် …၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ ဆိုပါတော့ …
သည်တော့ ကိုပေါက် ရေးထားတဲ့ …မားကတ္တင်းကြောင့်ပဲ ဒါတွေ ဖြစ်လာသလိုလို
ဒါကပဲ မားကတ္တင်း ရဲ့ ပုံစံကွဲ တခုလိုလို ..ပြောထားတာ လုံးဝ မမှန်ကန်ကြောင်း …
အပေါ်မှာ မားကတ္တင်းလို့ သတ်မှတ်ပြီး …ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီး …
ရေးထားတဲ့ မန့်ထားတဲ့ ရေးဖော်အပေါင်း သူငယ်ချင်း အပေါင်း ကို..
မဟုတ်တာကို မဟုတ်ကြောင်း မမှန်တာကို မမှန်ကြောင်း မပြောဖြစ်ခဲ့ရင်
ဆိုပြီးတော့ စိုးရိမ် မိရာကနေ ….
အမှတ်မှားခဲ့ကြ အစွဲမှား ခဲ့ကြရင် ဆိုပြီး တွေးမိလို့ ၀င်ရေးလိုက်ပါတယ်..
ကျနော် Sex-sell နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး စာ တပုဒ် ရေးဖူးပါတယ်…
နည်းနည်း controversial ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်တာ …
ဒါမျိုးတွေကို ထောက်ခံ သယောင် အားပေးသယောင် ဖြစ်မှာ စိုးတာကြောင့်ရော ..
မတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ ….. ကျနော် သိမ်းထားတဲ့ အထဲ ပြန်ရှာကြည့်ပါဦးမယ်…..
အဲ့သည့်အထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ တခုက ဘာလဲဆိုတော့..
လွတ်လပ်ရေး မရခင်ခေတ်က ပြည်တွင်းမှာထုတ်ခဲ့တဲ့ စာနယ်ဇင်း တွေမှာပါတဲ့
ကြော်ငြာ တချို့ပါပဲ … အဲ့သည့်ကတည်းက Sex-sell Approach ပါနေပါပြီ …
ကမ္ဘာမှာ … ဆက်စီကျအောင် ကြော်ငြာ အေး…ရောင်းရတာပဲကွ … ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်
ပေါ်ပြီး နှစ် ၅၀တွင်းတောင် မရောက်သေး.. (တကယ်က သည့်ထက် စောဦးမလား
မဆိုနိုင် မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အရ စောတာတွေ ကြုံရင် ကြည့်ချင်သားဗျာ …) အဲ့သည့်ကတည်းက
ပြည်တွင်းမှာပါ မစိမ်းတဲ့ Sex-sell approach ကို ၁၉၇၀ ကျော်မှ ပေါ်လာတဲ့ Marketing
ရဲ့ မူကွဲ တခု အနေနဲ့ တံဆိပ်ကပ်တာတော့ …လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး လို့ ပြောချင်ပါရဲ့…
ကမ္ဘာတန်း .. Sex-sell Advertising Approach နဲ့ … Marketing ဆိုတဲ့အရာ ..
စတင်ပေါ်ထွန်းလာတာ ..နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ လောက်ကွာသည့်တိုင်အောင် …
ဒါဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေ ကိုယ့်ပြည်တွင်းကို ၀င်လာလို့ ခုမှ ထူးထွေသည့်အံ့ဖွယ်ကြုံရတဲ့
အရာ ပုံစံမျိုး ရေးတာကိုတော့ ဆန့်ကျင် ရှုံ့ချ မိပါကြောင်းဗျာ …။
ဒါဆို ကျနော် ဘာကြောင့် မားကတ္တင်းရဲ့ မကောင်းကြောင်း ပြောတဲ့ ပိုစ့်တွေ ရေးနေလဲ
မေးစရာ ရှိပါတယ်.. ဟုတ်ကဲ့ ..ကျနော် မားကတ္တင်းရဲ့ ကောင်းကြောင်းတွေ ..
သူ့ကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ …ပိုမို အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းလို့ … ပိုမို
အလုပ်ဖြစ်တာတွေ .. မရေးချင်သေးပါဘူး … ။ ပြောရရင် …အဲ့ဒါတွေ တို့ …
ကိုယ်လုပ်နေတာသာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အလုပ် ဆိုတာမျိုးတို့ …ကိုယ်ရည်သွေးတာတွေကို
မနှစ်မြို့သူပါ …။ ပြောင်းပြန်အားဖြင့် … မကောင်းသောနည်းနဲ့ မားကတ္တင်းကို အသုံးချတာတွေ..
မသမာတဲ့ မားကတ္တင်း မတ်သတ်တွေ … ပရိုက်တစ်စ်တွေ သရုပ်ကို ပေါ်အောင် ရေးဖြစ်ပါတယ်..
ဒါဟာ ဘာလို့လဲ လို့ မေးလာရင် … သာမန်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ …
မားကတ္တင်း ကောင်းကွက်ကြောင့် အကျိုးရလာဒ် ဖြစ်လာမယ့် အနေအထားထက် …
မသမာတဲ့ မားကတ္တင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ရပ် တချို့ကြောင့် …မသိ နားမလည်သူ တွေ …
အကျိုးစီးပွား ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ဖြစ်ရတာမျိုးတွေကို ဇောင်းပေးရေးဖြစ်နေတာရယ်ပါ..
MLM ကစလို့ .. ယနေ့ထိ မူမမှန်သော ..မစစ်မှန်သော …ကိုယ်ကျိုးဖက်သော …
လိုရာဆွဲသော .. ဦးနှောက်ဆေးသော … အမည်းရောင် မားကတ္တင်း dark side of marketing
ကိုဇောင်းပေးရေးနေဖြစ်ပါတယ် …. ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလည်း ရှေ့လျောက် ..အတိအလင်း..
မျှပြီးရေးသွားမယ် လို့ သဘောထားပါတယ်…။
ရိုင်းရိုင်းနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးပဲ ပြောပါရစေတော့….။
သည်ပိုစ့်ကတော့ ..လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀ကျော်က ပေါ်ခဲ့တဲ့ ..Sales နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Ad ..Technique
တခုကို Marketing ကို လင်ကောင်ဖော်သလို …ရေးထားတာကြောင့် …
ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ရှုံ့ချပါကြောင်း နဲ့ …
Marketing Professional အပေါင်းကို …မှားယွင်းမိပါကြောင်း
သည်တခုတော့ … ရင်းနှီးချစ်ကြည်စွာ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါရဲ့ …
ဘာကြောင့်လဲဆို ..သည်ဆိုက် ရဲ့အဆင့်အတန်းအပြင်
သည်ဆိုက်မှာရေးနေ မန့်နေ.. (မရေးမမန့်နေပေမယ့် ဖတ်နေသူတွေရဲ့)
အဆင့်အတန်း ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
အဲဒီတော့ ပုံကြည့် ဂလုပြီးပြန်သွားတယ်ကွာ ဘာဖြစ်လဲ
မိခင်တယောက်က… ကလေးနို့တိုက်ပုံနို့တိုက်နည်းကို.. ဗီဒီယိုလုပ်တင်တာ.. Porn ဆိုဒ်ကသုံးလိုက်လို့.. တရားစွဲသတဲ့..
မြန်မာမိုဒယ်တွေလည်း.. ဓါတ်ပုံဆရာနဲ့..ကုမ္ပဏီတွေရဲ့.. အလွဲသုံးစားများ လုပ်ခံရသလား..
Posted: Aug 10, 2012 8:09 AM ET
Maryann Sahoury is suingaproduction company after an instructional breast-feeding video she appeared in was taken byathird party and used to create pornography.Maryann Sahoury is suingaproduction company after an instructional breast-feeding video she appeared in was taken byathird party and used to create pornography. (Katie Zezima/Associated Press)